Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 Tiger amin'ny tetikady ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-borona
Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 Tiger ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Aogositra 8, 2016
Tsy mahita olona izay mampiasa teti-tatoazy foana ianao noho ny dikany lehibe izay ataony rehefa hita. Ireo izay any Azia dia mahatakatra tanteraka ny dikan'ny hoe tigra iray amin'ny vatany.
Tiger Tattoo midika
Ny tatoazy Tiger no anisan'ny malaza indrindra amin'ireo Asiana. Ny hevitr'ilay #tiger no mahatonga azy io hiavaka. Ny tatoavin'ny tigra iray dia midika hoe ny fomba fiainan'ny olona tsy misy fameperana. Misolo tena ny herim-po, ny herisetra, ny hery ary ny hery. Azo lazaina fa solontenan'ny masoandro izy ireo satria inoana fa izy ireo dia tarihin'ny hery selestialy.
Ireo olona izay mandeha amin'ny tigra #tattoo dia tsy fehezin'ny fitiavan-tanindrazana satria mino ny hevitra. Ny fitiavana dia mampiditra an'ity tatoazy ity mba hampisehoana ny heriny. Ny tiger dia heverina ho mpiaro ireo maty. Izany no mahatonga azy ireo matetika hita any amin'ny fasana na fasana.
Tato tigra dia azo jerena any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao ary misolo tena zavatra maro koa izy ireo. Ny fiovan'ireto tatoazy ireto dia mahatonga azy ireo ho tsy mahazatra. Misolo tena ny herin'ny herim-po, ny hery, ny fanindrahindrana, ny filalaovana ary ny adidiny, ny loza sy ny fandringanana, ny angovo, ny fiarovana ary ny fitandremana, ny fitarainana ary ny fahaiza-manaon'ny firaisana ara-nofo. Izany no mahatonga ny olona maro mampiasa azy io. Ny hatsaran-tarehy izay mifatotra amin'ny tatoazy amin'ny tiger dia ny mahatonga azy io ho tian'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny ankamaroantsika matetika dia mampifandray ny Tiger Tiger amin'ny mponina any Azia. Izany dia satria Tiger dia malaza amin'ny Aziatika. Ny Tiger Aziatika dia lasa fantatra amin'ny maha-biby an-kira izay hita ho toy ny tatoazy androany.
Tiger Tattoo Tiger
Ny tatoazy dia mifanaraka tanteraka amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana. Na dia ny tsatoka feno aza dia tsy azo tsinontsinoavina raha ny fananana sary vitsivitsy indrindra.
Ny tigra dia azo aseho amin'ny elatra na ny elatra tsy misy elatra. Misy zavatra maro azo ampifandraisina amin'ny tiger toy ny lanitra, ny rahona na ny ranomasina. Raha any Andrefana ianao, dia mety hisy olona hieritreritra fa biby mampidi-doza izany.
Na dia izany aza, fantatry ny Tigers ny maneho ny harena, ny harena, ny fahefana, ny hatsaram-panahy, ny fahafahana ary ny fahefana.
Amin'izao fotoana izao, afaka mampiasa ny tatoazy ianao ary mitsangana amin'ny vahoaka. Maro ny antony mahatonga ny olona handeha ho an'io tatoazy manokana io. Tsy tokony hila avy any Azia na any Chine alohan'ny ahafahanao manosotra an'io tatoazy mahafinaritra io.
Tattoo Tiger Lovely
Ny ilainao dia artista tsara afaka manampy anao hitondra ny sasany amin'ireo Tigers tsara indrindra amin'ny ampahany amin'ny vatanao.
Ireo mpanakanto tatoazy ankehitriny dia mandray ny teti-tigre amin'ny toeran-kafa. Tsy mampaninona ny karazana #design izay tianao, vonona izy ireo hanome anao izany tatoavina mahagaga izay tsy azonao hanoherana ity.
Ny tigra dia biby mahafinaritra izay mampitony ny fontsika rehefa mahita azy ireo isika. Mety tsy hanana fahafahana hahita ireo fitorevika Tigers amin'ny vatantsika isika saingy manana tombontsoa ny hampiditra azy ireo eo amintsika.
Tazo Tiger tsara tarehy
Ny tatoazy Tiger dia lasa tiger malaza Tiger izay mety hampiasaina. Ny Tiger tsirairay dia manana ny lanjany izay ny antony tokony hitandremantsika ny karazana tatoazy Tiger izay hampiasaintsika.
Vehivavy Tiger Tattoo
Zava-dehibe ny hahatakaranao fa nanjary tena ilaina ny teti-tatoazy. Tokony haka ny fotoananao amin'ny fikarohana amin'ny alalan'ny katalaogy an-tserasera ianao alohan'ny hisafidiananao ny safidinao. Ny fotoana voalohany tokony hataonao dia mahazo tatoazy izay hiteny aminao hoe inona no ao am-pianarana.
Ny endrika teti-teti-patin'ny tigra dia famantarana marika iray izay hajaina manerana an'i Azia ary heverina ho mifandray amin'ny fahatsapana, ny fitiavany, ny herisetra, ny hery, ny hatezerana ary ny habibiana. loharanon-tsary
Any Korea, mino ny tigra fa ny tigra no maso mahita azy ary any Inde, ny tigra dia mahita ny sarin'ny Andriamanitra avo indrindra, Shiva na ny mpandringana izay hita fa mampiasa hoditra tigra toy ny akanjony na mandeha amin'izany. loharanon-tsary
Mampiseho ny fahamboniana manerana izao tontolo izao izany. Na izany aza, misy ny fotoana ahafahan'ny tigra mifandray amin'ny fahafatesana, ny ratsy ary ny fiainana. loharanon-tsary
Tsy afaka mijanona mihitsy ny fitiavana ny endrika sy ny ampahany amin'ny vatana izay nampiasana azy.Io azonao ampiasaina eo amin'ny ampahany amin'ny vatanao miaraka amin'ny loko amin'ny safidyo. Ho an'ny vehivavy dia azo ampiasaina hiresahana momba ny firaisana ara-nofo misy azy ireny. loharanon-tsary
Tsy dia misy ny ampahany amin'ny vatana izay tsy ahitan'ny tigra tsara. Diniho ity endri-javatra ity eo amin'ny vatanao. Tahaka ny hatsaran-tarehy no antony mahatonga ny ankamaroan'ny vehivavy na ny lehilahy manambady. loharanon-tsary
Tsy misy ampahany amin'ny vatana izay tsy mijery tsara ny teti-teti-drafitra. Mahavariana amin'ny sandry, ny ratra, ny lamosina na ny ampahany izay safidinao tahaka ity. loharanon-tsary
Tattoos toy izany dia tsara tarehy hijery ny antony mahatonga anao hampiasa azy io amin'ny lafiny iray amin'ny vatanao. Izany no antony ahafahanao mandeha amin'izany. loharanon-tsary
Azonao atao ny manova ny loko araka izay tianao. Tsy misy zavatra izay mety tsy ahafahanao mamorona manodidina na amin'ny endrika tatoazy. loharanon-tsary
Tianao ity drafitra ity? Inona no lazainy aminao rehefa mijery azy io ianao? loharanon-tsary
Tsy sarotra ny manao an'ity tatoazy ity ho mahaliana kokoa rehefa tonga amin'ny fampisehoana teboka mahatalanjona sy mahavariana amin'ity tatoazy ity. Tsy misy farany ny zavatra azonao atao amin'ny tatoazy loharanon-tsary
Izay ampahany amin'ny vatana izay tianao hoferana; Hampifaly anao mandrakariva izany. loharanon-tsary
lion tattoosanjely tattoosmehndi designtattoos armtattoos foottattoosAnkle Tattoostattoos backelefanta tatoazytattoo watercolorkoi fish tattootatoazy lolotattoos rahavavyHeart Tattoosmoon tattoosfitiavana tatoazycat tattoostattoo eyetattoo cherry blossomraozy tatoazynamana tattoos tsara indrindratattoos voronarip tattoostattoos sleevetattoos ho an'ny lehilahyeagle tattoosloto voninkazoTatoazy ara-jeometrikahenna tattooTattoo Feathertato ho an'ny vatofantsikatatoazy voninkazotattoo octopusmozika tatoazytattoos mpivadytattoos mahafatifatytattoo ideastattoo infinitytattoostattoos crosscompass tattootatoazy fokodiamondra tattootanana tatoazyscorpion tattooNy zodiaka dia mampiseho tatoazyarrow tattoomasoandro tatoazytratra tatoazytatoazy ho an'ny zazavavy